Hey’ada Culimada Soomaaliyeed oo iska fogeysay hadal Sh. Soomow ku weeraray Sh. Umul… – Hagaag.com
Hey’ada Culimada Soomaaliyeed oo iska fogeysay hadal Sh. Soomow ku weeraray Sh. Umul…
Posted on 22 Nofeembar 2019 by Admin in National // 0 Comments
Sheekh Bashiir Axmed Salaad iyo Sheekh Cali Wajiis oo ka mid ah mas’uuliyiinta hey’adda culimada Soomaaliyeed ayaa sheegay in hadalka ka soo yeeray Sheekh Soomow ee uu ku weeraray Shiikh Umal uusan ahayn mid ay la qabaan culimada Soomaaliyeed.
“Hadalka ka soo yeeray Sheekh Soomow ma ahan mid u ku matalayo culimada ee waa kalima ra’yigiisa ah, haddii Sheekha uu wax tabanayo ama su’aal uu qabo waxay ahayd in uu culimada Soomaaliyeed la soo xiriiro, Sheekha inuu ku degdego arrin noocaas ah ma ahayn”, ayuu yiri Sheekh Bashiir oo ah guddoomiyaha hey’adda culimada Soomaaliyeed.
Wuxuu intaa ku daray in Sheekh Umal uusan u imanin dalxiis iyo qaraabo salaan, balse uu u yimid sidii loo gargaari lahaa dadka Soomaaliyeed ee dhibaatada ka soo gaartay fatahaadaha, wuxuuna ku baaqay in laga soo qeybgalo muxaadarada Sheekh Umal oo laga faa’ideysto.
Eedeynta Shiikh Soomow ayaa timid ka dib markii Sheekh Umal uu shaaciyay inuu maalinta Jimcada ah ee 22-ka bisha November uu garoonka Eng. Yariisow ee magaalada Muqdisho ku qaban doono muxaarado.
Soomow ayaa si weyn uga soo horjeestay muxaadaradaas isagoo shacabka Soomaalida ka dalbaday inaysan ka qeyb galin muxaadarada Sheekh Umal oo uu ku eedeeyay inuu gaaleysiiyey Suufiyada, uuna taageersan yahay fekerka khawaarijta, isagoo xusay in fatwooyinkiisa lagu laayey dad badan.